Ahlusuna Waljameeca oo Guulo ka sheegatay Dagaalo maanta ka dhacay Muqdisho – SBC
Ahlusuna Waljameeca oo Guulo ka sheegatay Dagaalo maanta ka dhacay Muqdisho
Magaalada Muqdisho xarunta gobolka Banaadir Ahna caasimada Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay dagaalo xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocayadiisa kala duwan kuwaas oo ka dhacay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee magaaladaasi.
Dagaaladaas ayaa inta badan waxay u muuqdeen kuwa u dhexeeya ciidamada Ahlusuna waljameeca iyo xarakada Alshabaab walo ciidamada Amisan ay taageero siinayeen ciidanka Ahlusuna waljameeca .
Saraakiisha dagaalka ku jirtay ee Ahlusuna waljameeca ayaa dagaalkaasi guulo ka sheegtay iyagoona saxaafada Muqdisho u sheegay in ay dagaalkaasi ka gaareen talaabo militeri oo horleh Agagaarka Taleex, wadada dabka iyo Agagaaraha jidka sayidka.
Qaliif C/qaadir Macalin Nuur oo isagu ah Agaasimaha madaxtooyada DKMG ah ee Soomaaliya ahna masuuliyinta ugu sar sareysa Ahlusuna Waljamaaca ayaa saxaafada u gelbiyay goobaha horleh ee ay gacan ku hetooda la wareegeen maanta, waxaanu tusay gaadiid dagaal iyo Saanado militeri iyo sidoo kale horumar dhinaca dagaalka oo ay ka gaareen xarakada Alshabaab.
Dagaalka maanta dhacay ayaa waxa uu ahaa mid aad u culus kaas oo soo bilowday saaka Aroortii soona gaaray galabnimada maanta ah taas oo ilaa iyo hada la dareemi karo rasaas goos goos ah oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan .